Wasiirka Biyaha Oo Cadeeyay In La Lunsaday Mashruucii Biyo Balaadhin Caasimadda | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Wasiirka Biyaha Oo Cadeeyay In La Lunsaday Mashruucii Biyo Balaadhin Caasimadda
Hargaysa (SDWO): Wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland ayaa markii u horaysay daboolka ka qaaday in aanay jirin wax biyo balaadhin ah oo la soo gelin karro caasimadda dalka ee Hargaysa.
Saleebaan Yuusuf Cali Koore, waxa uu sheegay in la siyaasadeeyay dhulkii biyaha looga soo saari ahaa caasimadda Hargaysa, isla markaana ay ka xukuumad ahaan u qorshaysan tahay sidii si degdeg ah arrintaasi wax looga qaban lahaa.
Waxaanu hadalka wasiirku meesha ka saarayaa mashruuc muddo badan shacabka caasimadda lagu mashquulinayay oo loogu maagac daray biyo balaadhinta caasimadda, isla markaana shacabka lagu beer laxawsan jiray in uu dhamaad yahay.
Iyadoo ay bulshadda ku dhaqan caasimadda Hargaysa oo tirro ahaan lagu qiyaaso milyan iyo dheeraad 40% keliya ay helaan biyo, halka gebi ahaanba inta badan degmooyinka iyo xaafadaha Hargaysa ay biyo la’aani haysato.
Hadalkan wasiirka ayaa u muuqda mid bulshadda caasimadda ka nixiyay oo meesha ka saaray rejadii ay qabeen ee mashruuca Xunbo-weyne, kaasoo uu ku tilmaamay in aan goobtaasi wax biyo ah laga filan Karin.
Wasiir Koore, oo maanta warbixin ka siinayay guddiga joogtadda ah ee golaha Guurtidda oo uu hor tegay, ayaa sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixiyay qorshaha wasaaradda ee la xidhiidha fidinta biyaha dalkoo dhan.
Halkan Ka Daawo Hadalka Wasiirka: